Miomana ny hiaina miaraka amin’ireo anjely
“Koa amin’izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenananreo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany” Rôm. 12:1
Tsy isalasalana fa ny fampianarana tanantsika amin’izao fotoana izao no fahamarinana ankehitriny, ary koa efa manakaiky ny andro fitsarana isika. Miomana ny hihaona Aminy isika, Izay hotronin’ireo anjely masina manaraka Azy, Izay hiseho eny amin’ny rahon’ny lanitra mba hanao ilay fanendrena farany hanomezana fiainana tsy manam-pahataperana ho an’ireo mahatoky sy marina.
Mamihina ny fahamarinan’Andriamanitra amin’ny fahaiza-manao samihafa ananantsika eo ambanin’ny hery miasa mangina avy amin’izany fahamarinana izany dia hahatanteraka asa ho antsika izany, izay ilaina mba hanomezana antsika toe-tsaina mifanaraka amin’ilay fanjakam-boninahitra sy amin’ny fiaraha-monina misy ireo anjelin’ny lanitra. Ao anatin’ny sahanasan’Andriamanitra isika ankehitriny. Maro amintsika no vato mikotoantoana avy any amin’ny tany fihadiam-bato. Kanefa araka ny iankinantsika amin’ny fahamarinan’Andriamanitra, dia miantraika amintsika ny hery miasa mangina avy aminy. Manandratra antsika izany ary manaisotra ny tsy fahatanterahana rehetra sy ny fahotana eo amintsika, na manao ahoana na manao ahoana fisehon’izany. Toy izany no hahavaomana antsika hahita Ilay Mpanjaka ao amin’ny fahatsarany ary farany dia hikambana amin’ireo anjely madio sy masina any amin’ilay fanjakam-boninahitra. Eto no tanterahina ho antsika izany asa izany, eto no atao vonona ho amin’ny fiainana tsy manam-pahataperana ny tenantsika sy ny fanahintsika.
Ao anatin’ny tontolo izay mifanohitra amin’ny fahamarinana sy ny fahamendrehan’ny toetra isika, ary amiin’ny fitomboana ao amin’ny fahasoavana. Na aiza na aiza jeren’ny masontsika dia fahalovana sy faharavana, hasamponana sy fahotana no hita. Ary inona no asa tokony hosahanintsika eto mialoha indrindra ny handraisantsika ny fiainana mandrakizay? Ny hitahiry ny tenantsika hadio, ka ho afaka hijoro tsara tsy ho voaloto isika eo anivon’ny fahasimbana miraraka ompana manodidina antsika amin’izao andro farany izao.
Mirehitra mazava tsara ny jiro arytsy tokony hisy hahalala, satria Ilay Andriamanitra lehibe mihitsy no mpampianatra ny olona. Voantendry fa ho voahetsiketsika ilay lohahevitra lehibe momba ny fanavaozana ara-pahasalamana, ary ho voahozongozona mafy ny sain’ny besinimaro hanadihady; satria tsy azon’ireo lehilahy sy vehivavy atao, miaraka amin’ny fahazarany mpanota, mpanimba fahasalamana, mpandreraka ny loha, ny hamantatra ilay fahamarinana masina, izay amin’ny alalany no hahamasina, hampivoatra, hanandratra azy ireo, ary hahavonona azy ho amin’ilay fiaraha-monina misy ireo anjely masina ao amin’ilay fanjakam-boninahitra.